ညီမစိတ်တွေ ထိန်းလိုမရတော့လို့ပါ အကိုရယ် - Barnyar Barnyar
May 12, 2022 thanzin laypyay funny 0
သာအောင်က ဆိုင်ကယ် တက္ကစီ မောင်းသမားပေါ့။ လူပျို ကြီး တစ်ကိုယ်တည်းသမား။ တစ်ရက် တွက်ခြေမကိုက်သေးတော့ မိုးချုပ်တဲ့အထိ ဆွဲနေတာ။ ည ၁၁ နာရီလောက် ခရီးသည် ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို သွားပို့ပေးရတယ်။ သွားတဲ့လမ်းက ချောင်ကျကျပဲ၊ သွားနေရင်း လမ်းတစ်ဝက်အရောက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်က လှမ်းတားတယ်ဗျ။
အဲ့ဒါနဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ကောင်မလေး ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေး က ”အကို ကျမ ကိုလိုက်ပို့ပေးပါလား ” “ရတာပေါ့ ညီမက ဘယ်ကိုသွားချင်လို့လဲ ” “ခြေဦးတည့်ရာ တစ်နေရာကို သွားချင်တယ်။
ကျသင့်သလောက်ကို ပေးမှာပါ ” ” ဟာ အကို ကျနော့် အိမ်မရောက်သေးဘူးလေ ”” မင်း အိမ်က နီးနီးပဲ ကျန်တော့တာလေကွာ၊ မင်းလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပါ၊
ကောင်မလေးက ညဖက်ကြီးဆိုတော့ အန္တရာယ် များတယ်ကွ၊ ဆိုင်ကယ်ခကိုတော့ တစ်ဝက်ပဲ ပေးတော့ကွာ ” ” ဟာဗျာ၊ အကိုကလဲ ကျနော်က အိမ်အရောက် ငှားစီးလာတာလေဗျာ ” ”
ငါ့ညီကလဲ အိမ် နီးနီးလေး လမ်းလျှောက်လိုက်ပါ ၊ မဝေးတော့ပါဘူးကွာ ”“ပြီးရော ဗျာ၊ ပြီးရော ရော့ ပိုက်ဆံ ” လူကို ဘုကြည့်ကြည့်ပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ် က ဆင်းသွာပါလေရော။
သာအောင်က စကားသာပြောနေတာ အကြည့်က ကောင်မလေးက မခွာဘူးဗျ။ ကောင်းမလေးကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်ပြီး ကြည့်ပြန် ကြည့်ပြီးကြည့်ပြန်ပဲ၊ ကောင်မလေးက ခပ်လန်းလန်း။
အင်္ကျီလက်တိုနဲ့ ဘောင်းဘီပြတ် ဝတ်ထားတာ။ သာအောင်က ” ကဲ မိန်ကလေး တက် ၊ ဘယ်သွားချင်လဲ ၊ လိုက်ပို့ပေးမယ်။ ” “ဟုတ် အကို ” ”
ဟာ မင်းက လမ်းလျှောက်ပြန်လိုက်တော့ ငါသွားတော့မယ် ဘိုင့်ဘိုင် ” ” ဟင်း တစ်ကယ့် နှာခေါင်းနဲ့ လာတွေ့ နေတယ်၊ လေပါတယ်ကွာ ”သာအောင် တစ်ယောက် ဆိုင်ကယ် မောင်းထွက် လာခဲ့တယ်။
ကောင်လေး ပြောတဲ့ စကားကိုတော့ ခပ်သဲ့သဲ့လေးပဲ ကြားလိုက်ရတယ်။ လမ်းမှာ ကောင်မလေးနဲ့ စကားတွေ ပြောလာတာ။” မိန်ကလေးက နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ” ” ခင်မြပါ အကို ” ” ခင်မြက ဘယ်ကိုသွားချင်လို့လဲ ” ”
ညီမ ဘယ်သွားလို့ သွားရမှန်း မသိပါဘူး အကိုရယ် ” ” ဒါဆို အကို့အိမ် လိုက်ခဲ့ပါလား ၊ အိမ်မှာ အကိုက တစ်ယောက်တည်းနေတာ … လူပျို လူလွတ် တစ်ယောက်ပါ။
အိမ်မှာက ဘယ်သူမှ လဲ မရှိဘူး။ ” ” အို …. မသွားရဲပါဘူး ရှင် ၊ ခဏနေ….” ” ဘာမှ မကြောက်ပါနဲ့ ညီမရယ် ၊ အကို ညီမကို ပြုစုမှာပါ။ ”
“တစ်ကယ်ပြောတာလား ၊ အကို ၊ မညာရဘူးနော် ” ” တစ်ကယ်ပေါ့ ညီမရဲ့ ” ” ညီမလေ စိတ်ထိန်းမရတော့ဘူး အကိုရယ် ” ခင်မြက ပြောနေရင်းနဲ့ သာအောင်ခါးကို လှမ်းပြီး ဖက်လိုက်တယ်။
သာအောင်က ခင်မြလက်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး “အကို အမြန်မောင်းနေပါတယ် ညီမရယ် ” ခင်မြက လက်ကိုပြန်ရုပ်ပြီး အင်္ကျီကြယ်သီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲ ဖြုတ်လိုက်တယ်။
သာအောင်တစ်ယောက် အသံကြားတော့ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာ။ မျက်လုံးတွေပါ ပြူးထွက်သွားပြီး ဆိုင်ကယ် လက်ကိုင်တောင် ထိန်းမနိုင် ဘဲ လမ်းဘေးက မြောင်းထဲ ထိုးဆင်းသွားတယ်။
ဗွက်တွေနဲ့ သာအောင် မြောင်းထဲကနေ တရွတ်တိုက် တက်လာခဲ့တယ်။ မှောက်တဲ့အရှိန်ကြောင့် ခြေထောက်တစ်ဖက် သွင်သွင် ကျိုးသွားလေပြီ၊ တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး၊ မျက်လုံးကလဲ တောင်ကြည့်လိုက် မြောက်ကြည့်လိုက်နဲ့ အဲ့နေရာမှာပဲ သတိလစ် မေ့မြောသွားခဲ့တယ်။
သာအောင်တွေ့လိုက်ရတာက ခင်မြ အင်္ကျီချွတ်လိုက်တာ ဗိုက်ထဲက ကလီစာတွေ အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်လေ။ နှလုံး လှုပ်နေတာကအစ ဗိုက်က ဟောင်းလောင်းပွင့်လို့တဲ့။
သူငယ်ချင်းလည်း သူ့ကို လူနာ သွားမေးရင်း သူကပြန်ပြောပြတာ။ သူကိုယ်သူလဲ ဘယ်လိုဆေးရုံရောက်လာလဲ မသိဘူးတဲ့ဗျာ။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် credit photo
ညီမစိတျတှေ ထိနျးလိုမရတော့လို့ပါ အကိုရယျ
သာအောငျက ဆိုငျကယျ တက်ကစီ မောငျးသမားပေါ့။ လူပြို ကွီး တဈကိုယျတညျးသမား။ တဈရကျ တှကျခွမေကိုကျသေးတော့ မိုးခြုပျတဲ့အထိ ဆှဲနတော။ ည ၁၁ နာရီလောကျ ခရီးသညျ ကောငျလေး တဈယောကျကို သှားပို့ပေးရတယျ။ သှားတဲ့လမျးက ခြောငျကကြပြဲ၊ သှားနရေငျး လမျးတဈဝကျအရောကျ ကောငျမလေး တဈယောကျက လှမျးတားတယျဗြ။
အဲ့ဒါနဲ့ ဆိုငျကယျကို ကောငျမလေး ရှမှေ့ာ ရပျလိုကျတယျ။ ကောငျမလေး က ”အကို ကမြ ကိုလိုကျပို့ပေးပါလား ” “ရတာပေါ့ ညီမက ဘယျကိုသှားခငျြလို့လဲ ” “ခွဦေးတညျ့ရာ တဈနရောကို သှားခငျြတယျ။
ကသြငျ့သလောကျကို ပေးမှာပါ ” ” ဟာ အကို ကနြေျာ့ အိမျမရောကျသေးဘူးလေ ”” မငျး အိမျက နီးနီးပဲ ကနျြတော့တာလကှော၊ မငျးလမျးလြှောကျသှားလိုကျပါ၊
ကောငျမလေးက ညဖကျကွီးဆိုတော့ အန်တရာယျ မြားတယျကှ၊ ဆိုငျကယျခကိုတော့ တဈဝကျပဲ ပေးတော့ကှာ ” ” ဟာဗြာ၊ အကိုကလဲ ကနြျောက အိမျအရောကျ ငှားစီးလာတာလဗြော ” ”
ငါ့ညီကလဲ အိမျ နီးနီးလေး လမျးလြှောကျလိုကျပါ ၊ မဝေးတော့ပါဘူးကှာ ”“ပွီးရော ဗြာ၊ ပွီးရော ရော့ ပိုကျဆံ ” လူကို ဘုကွညျ့ကွညျ့ပွီး ဆိုငျကယျပျေါ က ဆငျးသှာပါလရေော။
သာအောငျက စကားသာပွောနတော အကွညျ့က ကောငျမလေးက မခှာဘူးဗြ။ ကောငျးမလေးကို ခွဆေုံးခေါငျးဆုံး ကွညျ့ပွီး ကွညျ့ပွနျ ကွညျ့ပွီးကွညျ့ပွနျပဲ၊ ကောငျမလေးက ခပျလနျးလနျး။
အင်ျကြီလကျတိုနဲ့ ဘောငျးဘီပွတျ ဝတျထားတာ။ သာအောငျက ” ကဲ မိနျကလေး တကျ ၊ ဘယျသှားခငျြလဲ ၊ လိုကျပို့ပေးမယျ။ ” “ဟုတျ အကို ” ”
ဟာ မငျးက လမျးလြှောကျပွနျလိုကျတော့ ငါသှားတော့မယျ ဘိုငျ့ဘိုငျ ” ” ဟငျး တဈကယျ့ နှာခေါငျးနဲ့ လာတှေ့ နတေယျ၊ လပေါတယျကှာ ”သာအောငျ တဈယောကျ ဆိုငျကယျ မောငျးထှကျ လာခဲ့တယျ။
ကောငျလေး ပွောတဲ့ စကားကိုတော့ ခပျသဲ့သဲ့လေးပဲ ကွားလိုကျရတယျ။ လမျးမှာ ကောငျမလေးနဲ့ စကားတှေ ပွောလာတာ။” မိနျကလေးက နာမညျဘယျလိုချေါလဲ ” ” ခငျမွပါ အကို ” ” ခငျမွက ဘယျကိုသှားခငျြလို့လဲ ” ”
ညီမ ဘယျသှားလို့ သှားရမှနျး မသိပါဘူး အကိုရယျ ” ” ဒါဆို အကို့အိမျ လိုကျခဲ့ပါလား ၊ အိမျမှာ အကိုက တဈယောကျတညျးနတော … လူပြို လူလှတျ တဈယောကျပါ။
အိမျမှာက ဘယျသူမှ လဲ မရှိဘူး။ ” ” အို …. မသှားရဲပါဘူး ရှငျ ၊ ခဏနေ….” ” ဘာမှ မကွောကျပါနဲ့ ညီမရယျ ၊ အကို ညီမကို ပွုစုမှာပါ။ ”
“တဈကယျပွောတာလား ၊ အကို ၊ မညာရဘူးနျော ” ” တဈကယျပေါ့ ညီမရဲ့ ” ” ညီမလေ စိတျထိနျးမရတော့ဘူး အကိုရယျ ” ခငျမွက ပွောနရေငျးနဲ့ သာအောငျခါးကို လှမျးပွီး ဖကျလိုကျတယျ။
သာအောငျက ခငျမွလကျကို လှမျးကိုငျလိုကျပွီး “အကို အမွနျမောငျးနပေါတယျ ညီမရယျ ” ခငျမွက လကျကိုပွနျရုပျပွီး အင်ျကြီကွယျသီးကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးဆှဲ ဖွုတျလိုကျတယျ။
သာအောငျတဈယောကျ အသံကွားတော့ နောကျပွနျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတာ။ မကျြလုံးတှပေါ ပွူးထှကျသှားပွီး ဆိုငျကယျ လကျကိုငျတောငျ ထိနျးမနိုငျ ဘဲ လမျးဘေးက မွောငျးထဲ ထိုးဆငျးသှားတယျ။
ဗှကျတှနေဲ့ သာအောငျ မွောငျးထဲကနေ တရှတျတိုကျ တကျလာခဲ့တယျ။ မှောကျတဲ့အရှိနျကွောငျ့ ခွထေောကျတဈဖကျ သှငျသှငျ ကြိုးသှားလပွေီ၊ တဈကိုယျလုံးလဲ ဆတျဆတျတုနျပွီး၊ မကျြလုံးကလဲ တောငျကွညျ့လိုကျ မွောကျကွညျ့လိုကျနဲ့ အဲ့နရောမှာပဲ သတိလဈ မမွေ့ောသှားခဲ့တယျ။
သာအောငျတှလေို့ကျရတာက ခငျမွ အင်ျကြီခြှတျလိုကျတာ ဗိုကျထဲက ကလီစာတှေ အတိုငျးသားမွငျနရေတယျလေ။ နှလုံး လှုပျနတောကအစ ဗိုကျက ဟောငျးလောငျးပှငျ့လို့တဲ့။
သူငယျခငျြးလညျး သူ့ကို လူနာ သှားမေးရငျး သူကပွနျပွောပွတာ။ သူကိုယျသူလဲ ဘယျလိုဆေးရုံရောကျလာလဲ မသိဘူးတဲ့ဗြာ။ ခငျမငျလေးစားစှာဖွငျ့ credit photo